Thibaut de Lataillade's Zvinyorwa pa Martech Zone |
Zvinyorwa na Thibaut de Lataillade
Thibaut De Lataillade, GetApp GVP, ane makore anopfuura 25 ane ruzivo muhutungamiri hwebhizimisi, kutengesa, uye kutengesa pasi pebhanhire rake. Ane rekodhi rekodhi mugore, kufamba, kushambadzira kwedhijitari, CRM, kushambadzira, kutengesa, uye nzira dzekukura. Thibaut akabata manejimendi uye zvinzvimbo zvepamusoro kumakambani makuru etekinoroji akadai seCegedim neSAP.
Muvhuro, Mbudzi 8, 2021 Chishanu, Mbudzi 12, 2021 Thibaut de Lataillade
Izwi rokuti "kutanga" rinofadza mumaziso evakawanda. Inomutsa mifananidzo yevanoisa mari vanofarira vachidzingirira mazano emamiriyoni emadhora, nzvimbo dzehofisi dzakashongedzwa, uye kukura kusingagumi. Asi tekinoroji nyanzvi dzinoziva chokwadi chisina kunaka chiri kumashure kwekufungidzira kwekutanga: kungowana nzvimbo mumusika chikomo chikuru chekukwira. At GetApp, tinobatsira vanotanga uye mamwe mabhizinesi kuwana software yavanoda kuti vakure nekuzadzisa zvinangwa zvavo zuva nezuva, uye takadzidza